Axmed Madoobe oo khudbad ka jeediyeey Shirkii Golaha iskaashiga Dowlad gobaleedyadda – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2018 5:16 g 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo maanta Khudbad ka jeediyay shirka Madasha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada dalka ee Garoowe ka furmay ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada ayan u qorshaysnayn inuu waqtiga xil hayntooda korosadaan
Khudbadkiisa wuxuu kaloo kaga hadlay xiriirka sii xumaanaya ee dowladda federaalka iyo Maamul goboleedyada, amniga, doorashada 2020ka iyo Nidaamla Federaalka.Wuxuu dhalill iyo canaan u jeediyay madaxda sare ee federaalka Soomaaliya
”Doorashada waa galaynaa anagu kumana aan darsanayno, Hal maalin kuma darsanayno haddaan nahay Dawlad Gobaleedyada, doorasho xor iyo xalaal ah ayaa dhiseynaa”ayuu yiri madaxweyne Axmed Madoobe
wuxuu ku dheeraaday sida uu usii xumaanayo amniga wadanka iyo gaar ahaan in la gabay masuuliyadii ka saarayd Dowlada Federaalka ah hogaaminta dagaalka ka dhanka ah Argagixisada isagoo cadeeyay in uu qabo tuhun ah in Al-Shabaab ay Dowladu kula jirto gorgortan taas oo meesha ka saartay howlgaladii dalka lagaga xorayn lahaa.
Waxaa Madaxweynahu uu sheegay in amnigu uu yahay ahmiyad gaar ah oo ay ahayd in laga wada shaqeeyo hadii la waayo taasna aysan xaalada wadanku horay u socon karin wuxuu sheegay in Dowladu ay xiita sugi ladahay amniga wadada makka Almukkarama taas oo xiita la kala xidh xidhay oo shacabku ay dhib badan ku qabaan isagoo hoosta ka xariiqay in ay tahay in howlahaas dib loo eegi doono isla markaasna madashu ay go’aan kasoo saari doonto xaalada amaanka wadanka.
Dhinaca kale Madaxweynahu wuxuu sheegay in dhamaan heshiisyadii la galay aysan waxba ka fulin qaarkoodna ay Dowlada Federaalka ah isbadal ku samaysay kuwaas oo kala ahaa heshiiyada qaybsiga khayraadka amniga iyo Doorashooyinka.
Isagoo arintaas ka hadlaya ayuu Madaxweynahu sheegay in Dowladu ay faafisay daacayado been ah oo ay ku sheegtay in madaxda Dowlad Goboleedyadu ay mudo xileedkooda kordhinayaan taas oo uu sheegay in ayna waxba kama jiraan tahay.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu sheegay in Doorashada Jubbaland ayna hal maalin daba maraynin wakhtigeeda isla markana ay sidaas oo kale yihiin dhamaan Dowlad Goboleedyada oo aysan jirin cid mudo kororsi samaynaysa wararka ay faafisay Dowlada Federaalka ahna ay qayb ka tahay dagaalka cad ee ay kula jirto hanaanka Federaalisaka ah oo ay uga gol leedahay in shaqaaqooyin ay ka abuurto Dowlad Goboleedyada.
Waxaa kale oo Madaxweynahu uu sheegay in Doorashada 2020 ayna qabsoomi karin waliba lagu hungoobi karo hanaankii qof iyo Codka ahaa hadii Dowlada Federaalka ah ayna badalin wadada ay dalka ku wado oo burbur horseedi kara.
Madaxwaynahu wuxuu sheegay in hanaanka Federaalka ah ee yahay nidaam daawo looga dhigayo dhibaatadii dalka ka dhacday isla markana guulo waa weyn laga gaadhay taas oo ay tahay in aan indhaha la iska tirin umada Soomaaliyeed ayuu sheegay in ay u taalo in ay wado kale qaado marka ay dhamaadaan dhibabkii loo qaatay hanaanka Federaalka ah oo anan wali gaadhin isgoyska aan wado kale ku dooran lahayn.
Madaxweynaha Jubbaland waxaa uu madaxda Federaalka ah xusuusiyay in ay Dowladnimada Soomaaliya tahay qori isku dhiib ninba uu meel gaadhsiinayo oo aanay ahayn wax maanta uun bilowday Dowladahii Soo maray dalka burburkii ka dib ayuu sheegay in ay mudan yihiin in lagu amaano sida ay ugu soo dhabar adaygeen marxaladahii adkaa ee ay dalka soo dhaafiyeen.
Khilaafka Dowlad Goboleedyada iyo Federaalka ayuu sheegay in ay sal u yihiin qodobo masiiri ah sida amniga wadanka qaybsiga khayraadka doorashooyinka iyo dib u eegista Dastuurka oo hadii aan laga heshiin koox kali ah ayna siday doonto ka yeeli karin isla markana daraf qudha ayna Soomaaliya aragtidooda iyo wixii ay jecel yihiin ku maamuli karin.
Gaba gabadii Madaxwaynahu wuxuu sheegay in xaalada wadanka si guud loo qiimayn doono mudada shirkan uu socdo isla markana kadib la guda gali doono sidii dhamaan Bulshada Siyaasiyiinta Aqoon yahanka iyo Culimadu u yeelan lahayeen shirar aayaha wadanka lagaga hadlayo.